होटल रेष्टुरेन्टमा किन छापा मारिन्छ सर्वेन्द्र सा’व ?
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘नक्कली जोगीले बढी खरानी घस्छ’ नभन्दै हो रैछ । किनकि जिन्दगीको आधी जीवन जागिरमै बिताइसकेकाहरुले जब माथिल्लो पदमा बढुवा वा जिम्मेवारी दिँदा बढी नै हुँकार हुने गरेको छ देशमा । चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायलगायत सरकारी निकायमा पद वा जिम्मेवारी पाउँदा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दै हुँकार गर्नेहरुको लाइन र सूची लामो छ ।
आज यहाँ लेख्न खोजेको चाहिँ सुरक्षा निकायभित्रको हुँकार । अहिले प्रहरीको मुख्यालयमा पनि नयाँ आईजीपीको नियुक्ति भएको छ । केही महिनाअघि काठमाडौं परिसरमा नयाँ प्रहरी प्रमुख सरुवा भएर आए । आईजीपीमा नियुक्ति हुनासाथ उनका आसेपासेले लेखे सर्वेन्द्र खनालसामु चुनौती छ । चुनौती कहाँ छैन ? आफ्नै घरमा त चुनौती हुन्छ भने यो ता देशमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गराउने निकायको प्रमुख भए । यहाँ खनालभन्दा पनि केही महिना अधि काठमाडौंको शान्ति सुुरक्षा दिन्छु दिलाउँछु भन्दै सपथ खाएर सरुवा भई आएका प्रमुखको बारेमा लेख्न लागेको छ । काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख जब कुर्सीमा बसे र पहिलो निशाना होटल र गेष्टहाउस नै भयो । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा सरुवा भएर आएका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले पनि ६४ वटा होटल तथा गेष्टहाउसमा छापा हानी ५० जनालाई पक्राउ गरे । तर, उनीहरुलाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ त गरियो । तर, के कारबाही भयो ? पक्राउ परेको होटल र रेष्टुरेन्टमा के भएर समाएको हो भन्ने चाहिँ गोप्य राखियो ।
साना होटल र गेष्टहाउसमा छापा हानेर खाना खाइरहेका र सुतिरहेका जोडीलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले ठूला र तारे होटलहरुमा युवतीसहित जानेहरुलाई पक्राउ गर्दैन । गेष्टहाउसमा जाने र स्टार होटलमा जाने मानिस नै हुन् । तर, प्रहरीले गेष्टहाउसमा जाने श्रीमान् श्रीमती नै भए पनि बुझ्दै नबुझी जघन्य अपराधीलाई झैं पक्राउ गर्दछ । तर, स्टार होटलमा जाने युवायुवतीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न किन सक्दैन ? ठूला होटलमा गएर यौनसम्पर्क गर्नु कानुन सम्मत छ र आईजीपी साव ?
साना होटल र गेष्टहाउसमा यौनसम्पर्क गर्नु अपराध हो ? यो प्रश्न होटल व्यवसाय गर्ने हरेकले गर्न थालेका छन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति प्रहरीले होटल रेष्टुरेन्टमा छापा हानेको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
नयाँ प्रहरी प्रमुखले आउनासाथ आर्थिक लाभ लिनकै लागि छापा हान्ने गरेको आरोप पनि रहेको छ । केही गेष्टहाउस र होटलमा छापा हानेर अरु सबै व्यवसायीहरु तर्साउने र असुली गर्ने यो काइदा नयाँ आउने सबै हाकिमले प्रयोग गर्दैआएका छन् ।
नयाँ आएका एसएसपी पोखरेल र गत साता अवकाश भएका महानगरीय प्रहरी आयुक्त एआइजी जयबहादुर चन्द दुवैले आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि होटल र रेष्टुरेन्टमा छापा हानेको आरोप लागेको छ । निर्वतमान एआइजी चन्द २०७४ चैत २८ मा अवकाश भए । आइजीपी हुनका लागि शेरबहादुर देउवालाई ठूलो रकम बुझाएको आरोप लागेका एआइजी चन्द त्यो उठाउनका लागि जाँदाजाँदै होटल र गेष्टहाउसबाट घूस उठाउन तल्लीन भएर लागेको अरोप लाग्यो । १२ दिनमात्र जागिर अवधिमा एआइजी चन्दले सबैभन्दा बढी आपराधिक गतिविधि हुने नयाँबसपार्क, पुरानो बसपार्क र कलंकी क्षेत्रका होटलबाट आर्थिक सङ्कलन गरेको अरोप लागेको छ । यो होटल सञ्चालकहरुको आरोप हो ।
सत्य के हो त्यसको छानबिन प्रहरी विभागबाटै होला । सुन्धारा र कोटेश्वरका प्रहरी वृत्तका प्रमुखले एआइजी चन्दले भनेअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरुको क्षेत्रमा छापा हान्न निर्देशन दिएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो । तर, नयाँबसपार्क प्रभागका इन्चार्ज प्रताप पौडेल, सिंहदरवार वृत्तका अपिल बोहरा र कलंकी प्रभागका उद्धव पोखरेल एआइजी चन्दकै निकट भएकाले ती स्थानमा छापा नहानिएको आरोप पनि छ । एआइजी चन्दले छापा हान्नका लागि नगर प्रहरीको टोली परिचालन गरेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्टमा खाना खाइरहेका केटाकेटीलाई अपराधीलाई झैं पक्राउ गर्नु मानव अधिकारको हनन हो ।
विदेशबाट आएका साथीसँगै अध्ययन गरेकी महिलासँग होटल वा रेष्टुरेन्टमा बसेर खाजा खानु अपराध हो र ? साथी, आफन्तसँग बसेर होटलको एउटै टेवलमा बसेर खाजा खानु, खाना खानु पनि अपराध हो र ? साथीसँग होटलमा महिला पुरुष बसेरसँग लामो समयपछि भेटपछि टेबुलमा बसी कुराकानी गर्दैै खाजा खाना खाँदा ह्वारह्वार्ती प्रहरी आएर पक्राउ गरी लैजानु प्रहरी प्रशासनको कुन दफामा उल्लेख छ आईजीपी साब ? खाना खाइरहेका युवायुवतीलाई पक्राउ गरे के सन्देश दिन खोजिएको छ । हो अवैध क्रियाकलापमा संलग्नलाई पक्राउ गर्नु कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर, होटल या रेष्टुरेन्टमा बसेर खाना खाएकै भरमा महिला पुरुषसँगै टेबुलमा बसेकै भरमा पक्राउ गर्नु नेपालको कानुनको कुन दफामा उल्लेख छ ।
कुनै कुरा नसोधी पुरुष र महिलालाई अपराधीलाई झैं प्रहरीले पक्राउ गरी भ्यानमा कोचेर लगिन्छ आखिर के का लागि गरिन्छ त्यो कार्य ? प्रायः यस्ता दृश्य देखेपछि प्रहरी जनताको साथी भन्ने नाराले नै कुरीकुरी गरेको छैन र आइजीपी साब ? प्रहरीले पक्राउ गरेपछि कुनै कुरा सुन्दैनन् एकोहोरो कठालो समाए भ्यानमा कोचिन्छ र आरोप लगाइन्छ अवैध यौनसम्र्पक गर्दैगर्दा पक्राउ परेको ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सुरक्षित रहेको हाम्रो संविधान प्रहरी प्रमुखहरुले बेवास्ता गरिएको छ । नेपालको प्रहरीले होटल र रेष्टुरेन्टमा खान जाने ग्राहकलाई पनि यौन गतिविधि गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गर्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो ।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रणभन्दा पनि पहिला होटल गेष्टहाउसमा गएका जोडीलाई पक्राउ गरी बहादुरी प्रदर्शन गर्ने कार्यमा प्रहरी लाग्दै आएको छ । पहिला होटल रेष्टुरेन्टमा खान वा बस्न गएका युवायुवतीहरुलाई पक्राउ गरी विगतकै परम्परालाई निरन्तरता विश्व पोखरेलले पनि दिएका छन् । ती होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गएका जोडीलाई प्रहरीले अपराधी जसरी पक्राउ गर्नुलाई मानवअधिकारसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
काठमाडौं परिसरमा आउने नयाँ प्रमुखले सरुवा हुनासाथ होटल तथा गेष्टहाउसमा छापा हानेर तर्साउने र सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । सेटिङ मिलेपछि ती होटल तथा गेष्टहाउसमा जेजे गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने क्रम विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
आउनासाथ होटल रेष्टुरेन्टमा छापा हान्ने प्रहरी प्रमुख कार्यकालभरि फेरि कहिल्यै पनि त्यतातिर हेर्दैनन् । होटल तथा गेष्टहाउसमा आपराधिक गतिविधि हुने गुनासोको आधारमा छापा हान्ने अभियान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर बताए । तर, आपराधिक गतिविधि बढी हुने नयाँबसपार्क र कलंकीमा छापा हानिँदैन ।
यौन गतिविधि साना होटलमा मात्र होइन, ठूला होटलमा पनि हुन्छन ठूला तारे होटलमा प्रहरीले किन छापा हान्दैन । तर, प्रहरी भने क्रिमिनल एक्टिभिटी हुने ठाउँमा प्रहरी कारबाही हुँदा व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा भन्न मिल्दैन भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा उत्तर दिने गरेको छ ।
समाजलाई सव्य बनाउने भन्दै प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा बढुवा हुनासाथ किन होटल, रेष्टुरेन्ट र चिया पसलमा समेत छापा मारिन्छ । सँगै युवा युवती बसेर खाँदै गरेका र कुरा गरेको अवस्थामा यौनक्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गरिन्छ । अपराधीझँै भ्यानमा कोचिन्छ , हातमा उस्तै परे हातकडी नै लगाएर लगिन्छ । अनि प्रहरी कार्यालय लगेर विभिन्न आरोप लगाउँदै दुःख दिइन्छ । पक्राउमा परेकाले कुनै कुरा भन्न नै दिइँदैन बोलेमा कुटिन्छ, लछारपछर गरिन्छ । केही दिन राखेर यातना दिएर छोड्ने गरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा छापा मारेर दुःख दिने अनि व्यवसाय सञ्चालकसँग बार्गेनिङ गर्दै महिनाबरी असुली गर्ने लाइन मिलाउनकै लागि गरिएको हो छ छापा सर्वेन्द्र साव ।
जीवनका अपरिहार्य आवश्यकताहरुमध्ये पानी एक हो । पानीविना जीवनको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । विश्वजलवायु...